Pa-Peji SEO Yakanakisa Maitiro muna 2013: 7 Mitemo yeMutambo | Martech Zone
China, Kukadzi 14, 2013 China, Kukadzi 14, 2013 Jayson DeMers
Parizvino, ndine chokwadi kuti wanzwa zvakakwana nezve pa-peji optimization kuti ugare kwehupenyu hwese. Ini handidi kudzokorora iwo mamwe mantras awakange uchinzwa kubva gore rapfuura. Ehe, pane-peji SEO rave kunyanya kukosha (ini handitombo rangarira nguva payanga isiri), uye hongu, pane-peji SEO inogona kugadzira kana kupaza mikana yako pachinzvimbo chepamusoro paGoogle SERPs. Asi izvo zvachinja inzira yatinoona nekuzvibata nayo kune-peji SEO.
Mazhinji maSEO anowanzo funga nezve-peji-optimization seyakanyanya tekinoroji kuwanda kwekodhi. Iwe unoziva chibooreso: meta tag, canonical URLs, alt tags, yakakodzera encoding, yakanyatsogadzirwa, hunhu-muganho-unogara zita remategi, nezvimwe.
Izvo ndizvo zvekutanga. Uye panguva ino, ivo vakura-chikoro. Ivo vanoramba vachioneka pane-peji peji SEO yekutarisa, asi iwe neni tinoziva kuti iyo yakazara demografia yeSEO yachinja zvakanyanya, kunyangwe hazvo hwaro hwekutanga hwaramba hwakafanana. Nekuda kweshanduko iyoyo, maitiro aunoona pane-peji SEO anofanirwa kugadzirisa futi. Ndozvatiri kuzotarisa ikozvino.
Pa Peji SEO: Iyo Nheyo
Kana webhusaiti yako isina kunyatsogadziriswa pa-peji, kuedza kwako kubva pawebhusaiti (chinongedzo kuvaka, kushambadzira zvemukati, zvemagariro venhau) pamwe hazvizoburitse mhedzisiro. Kwete kuti ivo havazogadzire chero chinhu zvachose, asi inopfuura hafu yezvaunoedza zvinogona kupedzisira zvaenda pasi nekudonha.
Iko hakuna rakajeka bhuku remutemo rinoti: ita X, Y, uye Z mune-peji optimization uye chinzvimbo chako chinokwira neA, B, kana C. On-peji optimization yakavakirwa pamiyedzo, analytics uye zvikanganiso. Iwe unodzidza zvakawanda nezvazvo nekutsvaga izvo zvisingashande pane izvo zvisingaite.
Asi pazvinhu zvese zvekuchengetedza mupfungwa, pane izvi: Kana iwe ukasatarisira yako iri-peji SEO, iwe ungangodonha kana kusara kumashure: mune masiteki, mukutendeuka, uye muRI.
Asi kutanga ngatibvise iyi kumusoro: Sei kukakavara nezve-peji SEO? Mushure mezvose, pane tani yezvinhu zviripo pamusoro payo kare. Nyanzvi zhinji dzakanyora zvakanaka nezvazvo.
Iyo inoshanduka demografia yeinjini yekutsvaga algorithms yakachinja izvo zvinhu zviri kutamba mune kuti munhu anosarudza kuita sei SEO. Iwe hauchakwanise kufunga maererano neakakosha mazwi uye inbound zvinongedzo wega. Saizvozvo, iwe hauchakwanise kufunga maererano ne meta uye alt tag chete (ehe, izvi zvinosanganisira zita rechiratidzo, zvakare).
Pane-peji SEO haisi yezve yako saiti yakanyorwa sei. Izvo zvakare nezve nezve yako saiti inotaridzika isina-mapfupa (iyo robot kuona), uye kuti yako webhusaiti inopindura sei kune akasiyana masikirini. Inosanganisira nguva yekuremerwa uye chiremera. Uye negwara rinotungamirwa neGoogle muna2013 nekupfuura, zviri pachena kuti pane-peji zvinhu uye zvekusiya-peji zvinhu zvinofanirwa kumisidzana uye kubvumirana pamwe neyakajairika, yakajeka, yakasikwa nzira. Ndokusaka tichifanira kuongorora zvakare-peji SEO zvishoma zvakanyatso chenjera.
1. Meta Mata Ndiwo Angori Mavambo
Takaziva nekushandisa meta tag kubva pavakasvika. Iyo meta "kiyi-kiyi" tag yakaenda-yapfuura, seSEO chinzvimbo chinhu, asi yakawanda kupisa kwave kugadzirwa mukukurukurirana nezve iko kushandiswa kwemeta tsananguro ma tag kubva kune SEO poindi-yekutarisa.
Kunyanya zvakanyanya kupfuura SEO zvinongedzo zvinhu, inyaya yekuti meta tsananguro meta inopa mukana wekukanganisa maitiro ako webhusaiti inoratidzwa mumhedzisiro yekutsvaga. Iyo huru meta tsananguro tag inogona kuburitsa yako mhedzisiro pamberi peiye mukomana chinzvimbo pamusoro pako. Ichiri chiito chakanaka kushandisa mazwi akakosha kana uchikwanisa, pamwe nenzvimbo dzinozivikanwa (kana zvichibvira), asi chekutanga uye chikuru chinofanirwa kuve chinangwa chekukwezva mabhatani kubva kuvanhu.
2. Canonical, Duplicate, Broken Links, nezvimwe.
Marobhoti eGoogle ave akachenjera kwazvo, kusvika padanho rakabvaruka mahukama uye mapeji akadaidzwa anosimudza mireza tsvuku nekukurumidza kupfuura bara. Ndokusaka chaizvo iwe uchizowana canonical zvinongedzo (uye iwo anoenderana macode) kuve akakosha zvakanyanya.
Akaputsika zvinongedzo uye makopi haasi iwo chete anti-SEO. Ivo vanopesana-mushandisi zvakare. Chii chako chekutanga kuita kana iwe ukabaya pane iyi link iyo inongoratidza kukanganisa kwepa peji?
3. Maonero eRobhoti
Zvinyorwa zvinoramba zvichinyanya kukosha chikamu chewebsite chero nanhasi. Ipo Google ichiratidzira mamwe mavhidhiyo uye midhiya yakakwira kupfuura mamwe mamwe mazwi akakosha, mawebhusaiti akaumbwa zvakanaka uye zvine hupfumi zvemukati vachiri kutonga iro roost.
Kunyangwe isina kunyatsoita chokwadi, mhedzisiro yacho yakanaka chaizvo kuti yako webhusaiti inotaridzika kune anokambaira. Zvino, ongorora zvinhu zvese pane inotevera yekutarisa:
Chiratidzo chako chiri kuratidza kunge chinyorwa?
Iko kufamba kuri kushanda nemazvo here? Zvinotyoka here?
Izvo hazvo zvirimo zve peji rako zvinoratidzira kumusoro chaiko mushure mekufamba?
Pane here zvimwe zvinhu zvakavanzika zvinoratidza kana JS yakaremara?
Izvo zvemukati zvakamisikidzwa zvakanaka?
Izvo zvese zvimwe zvidimbu zveiyo peji (kushambadza, mifananidzo yemabhanhire, mafomu ekusaina-up, zvinongedzo, nezvimwewo) zvichiratidza mushure mezvakakura zvemukati?
Pfungwa yekutanga ndeyekuti uve nechokwadi chekuti zvemukati (chikamu chaunoda kuti Google chione) chinouya nekukurumidza pamwe nemazita akakodzera uye tsananguro dziripo.
4. Load Nguva Avhareji uye Size
Google yakagara yaona saizi uye avhareji nguva yekutakura yemapeji. Izvi zvinopinda munzvimbo yealgorithm nekuwanda kwekuverenga uye zvinokanganisa chinzvimbo chako muSERPs. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuve nezvakanaka zvemukati pane yako webhusaiti, asi kana iwo mapeji akatakura zvishoma nezvishoma, Google ichave inonetseka nekukuisa pamusoro iwe kupfuura mamwe mawebhusaiti anotakura nekukurumidza.
Google ndeyekugutsikana kwevashandisi. Ivo vanoda kuratidza vashandisi vavo mhedzisiro inoenderana iyo inowanikwa nyore nyore. Kana iwe uine matani eijascript snippets, majeti, uye zvimwe zvinhu zvinodzora nguva yekuremerwa, Google haisi kuzokupa chinzvimbo chepamusoro.
5. Funga Kufamba, Funga Kugamuchira
Iyi ndiyo imwe yenyaya dzinonyanya kutaurwa mukushambadzira pamhepo nhasi. Kubva kushambadziro mbozhanhare uye kutsvaga kwemuno kumusika maitiro mu desktop / piritsi yekushandisa, zviri pachena kuti kuenda kune nhare-yakagadziriswa saiti ndiye fungu ramangwana.
Paunofunga nezve mobile / inopindura webhusaiti, unoenda sei nezvazvo? Inopindura senge muCSS midhiya mibvunzo, kana matunhu matsva zvachose se "m.domain.com"? Iyo yekutanga inokurudzirwa kazhinji nekuti izvi zvinochengeta zvinhu munzvimbo imwechete (yekubatanidza muto, hapana kudzokorora, nezvimwewo). Inoita kuti zvinhu zvive nyore.
6. Chiremera & AuthorRank
Iye munyori-meta anowana chisi chitsva pahupenyu neGoogle inosimudzira iyo MunyoriRank metric. Izvo zvakaoma zvishoma kupfuura izvo izvozvi, zvakadaro. Iwe uchafanirwa kugonesa akapfuma mapiketi ewebhusaiti yako, ita shuwa kuti yako Mbiri yeGoogle + yakazadzwa, uye woibatanidza iyo neako blog / webhusaiti. AuthorRank yakabuda seyakakosha uye inooneka metric iyo inokanganisa peji chinzvimbo, uye ndeimwe yeiri papeji peji matekiniki aunofanira kunyatsoita. Kwete chete iyo ichavandudza yako masosi, asi zvakare ichavandudza yako yekudzvanya-kuburikidza chiyero muSERPs.
7. Dhizaini Haifanire Kuva Yekupedzisira Chinhu Pane Yako Runyorwa
Sezvineiwo, ini ndaifanirwa kunyora nezve ichi sechinhu chekupedzisira nekuti vanhu vazhinji vanorangarira chete chekupedzisira chavakaverenga mune chinyorwa. Vakaomesesa SEO vanhu vanogara vachiona kukosha kwekugadzirwa.
Aesthetics uye kuverenga zvinodzika zvakananga kubva dhizaini yewebhusaiti. Google yakanaka pakuziva izvo zvinoratidza "pamusoro pechipfuva" ​​pamawebhusaiti, uye Google inokurudzira zvakajeka kuti iwe uise zvirimo pamusoro pechipfuva kuitira kuti vaverengi vako vabatwe kune ruzivo kwete kushambadzira.
Pane-peji SEO haisi chete nezve meta kodhi uye canonical URL. Izvo ndezvekuti yako webhusaiti inosangana sei kune mushandisi uye kune iyo robhoti. Izvo ndezve maitiro aunoita chokwadi chekuti webhusaiti yako inowanikwa uye inoverengwa, uye ichine ruzivo rwakakwana pasi pehood yeinjini dzekutsvaga kuti dzitore nyore.
Tags: pane-peji seopane-saiti seopanzvimbo seoSearch Engine Optimizationseo
Kutengesa Kugonesa Matipi
Kukadzi 14, 2013 na6:37 PM
Saka zvinoita sekunge iwo chaiwo pa-peji SEO maitiro akanakisa ari pa-peji akanakisa ekushambadzira maitiro ane akati wandei kunze kweanokambaira. Great post.
Kukadzi 14, 2013 na7:12 PM
Nice post asi handina kuwana chinhu chitsva mairi !!
Mar 1, 2013 pa 2: 26 PM
Thanx Jayson kunyora chinyorwa chakakosha.
Mar 19, 2013 pa 3: 02 PM
Ndatenda nematipi Jay, uri kundichengeta kusvika parizvino paSEO mutambo.
Apr 5, 2013 pa 12: 10 PM
Ndiri kuzopa mharidzo kuchikwata chedu nezve SEO tactics ye lead gen uye izvi zvaibatsira zvakanyanya. Ndatenda! Iva neChishanu chakanaka.
Apr 5, 2013 pa 1: 07 PM
Apr 9, 2013 pa 12: 49 PM
Nice blog ruzivo rwakadai….
Apr 23, 2013 pa 9: 35 PM
ndinofanira kudzoka kune yangu SEO ye dummies
Apr 24, 2013 pa 8: 59 AM
Jayson - yedu saiti-yakagadzirwa zvemukati. Isu tinobvumirawo vashandisi kudzima zvinyorwa zvavo. Kana kuve neakatyoka zvinongedzo zvichikanganisa yedu SEO masosi, ndingatenderedza sei chokwadi chekuti mushandisi angafunga kubvisa chidimbu chemukati mushure mekunge injini yekutsvaga yaisa indexed?
May 3, 2013 pa 2: 43 AM
Great post Jayson, ndatenda nekugovana 🙂 unogona here kukurudzira maitiro akanakisa emameta-tag?
May 3, 2013 pa 8: 10 AM
Tsananguro dzeMeta dzakakosha pakukwezva vashandisi veinjini yekutsvaga kuti vadzvanye, gara uine inomanikidza meta tsananguro tag. Meta keywords tag inoramba ichiregeredzwa neinjini dzekutsvaga asi mamwe ma analytics maapplication anoashandisa. Geographic meta tags haisati yaratidza vimbiso yakawandisa, asi ndaizovawedzera nechero data yenzvimbo. Zvinobatsira here?
May 3, 2013 pa 10: 06 AM
Mhoro Douglas, ndatenda nekutevera: zvakanaka kuwana zano rako! vamwe vanhu vakatiudza kuti ma SEO tag edu haana kunaka, uye ndakatendeukira kune avo vakanaka kuti vabatsirwe 🙂 izvi zvinobatsira! zvakadini nehurefu hwemusoro hunofanira kuva?
May 3, 2013 pa 10: 28 AM
Chokwadi - zita rinofanira kunge riri pasi pemakumi manomwe mavara. Tsvaga "Maitiro Ekugadzirisa" pane ino blog uye isu tine yakanaka chaizvo nhanho nhanho nzira!
May 15, 2013 pa 3: 27 AM
Ichi chinyorwa chinobatsira. Ndakaashandisa panzvimbo yangu. Nguva yangu yekutakura nzvimbo ndeye 88. Zvose ma tags uye js anoshandiswa zvakanyatsonaka, asi nzvimbo yangu yepaiti ndeye 2 chete.
May 21, 2013 pa 12: 56 PM
Ndiri kuverenga akawanda ekuraira nguva pfupi yadarika nezve 'pamusoro pezvinyorwa'. Izvi zvinoreva here kuti iyo yakajairwa template / theme dhizaini yatinoona kunze uko - hofori yemufananidzo inotsvedza kumusoro, 3-4 yemukati mabhuroki pazasi, uye zvemukati zvemukati pazasi - zvinopokana zvakananga nezano iro?
May 21, 2013 pa 1: 05 PM
@google-323434ee3d2d39bcbda81f3065830816:disqus mamwe mapeji akanakisa ekushandura paInternet akareba kwazvo, aine makopi marefu, zvipupuriro, wongororo uye tsananguro yechigadzirwa. "Pamusoro pekupeta" inoenderera mberi nekudhirowa kwakawanda kudzvanya paavhareji, asi vashandisi vanoshandiswa kupuruzira uye havanetse nazvo. Ini ndaizokanganisa padivi rekuyedza ndoona ndisati ndaita zvese saiti pfupi.
May 21, 2013 pa 1: 20 PM
Ndatenda @douglaskarr:disqus .. uri kutaura nezve mushandisi-ruzivo uye CTR, asi chakandinetsa mune izvi (nezvimwe) zvinyorwa, ipfungwa yekuti, "Google yakanaka pakuziva izvo zvinoratidzira" pamusoro pekupeta" pa. mawebhusaiti". Izvi zvinondiita kuti ndishamise kana kunyange saiti inonyatsoita pane ux/conversion side iri kurangwa neimwe nzira. Pane pfungwa pane izvozvo kana kuti ndiri kungozviverenga zvisizvo?
May 21, 2013 pa 1: 24 PM
Ini handingambofa ndakamira kuGoogle maringe neruzivo rwemushandisi. Muchokwadi, ndingapokana kuti mawebhusaiti ane isina kudzika peji zvemukati anowanzo kunetsa kuisa chinzvimbo. Vatengi vedu vanoona mhedzisiro iri nani kana vaine 'zvakakora' zvemukati. Kana vashandisi vako vakada zvemukati, saka Google ichada zvirimo!
Jun 21, 2013 na3:06 AM
Zvakanaka. Ndinokutendai nekundiyeuchidza nezve kukosha kwekupfuma snippet uye chinzvimbo chemunyori.
Nov 4, 2013 na7:03 AM
Ini ndinoonga kuedza kwawakaita muchinyorwa ichi kuti upe yakakodzera uye yazvino yakanakisa SEO maitiro ekukwira kumusoro mumainjini ekutsvaga. Aya ndiwo anowanzo kutariswa mapoinzi sezvo anonyanya kusimbisa chete pameta tags, peji rezita uye mazwi akakosha etc uchiregeredza akakosha enzvimbo yekutsvaga. Ndatenda.